ဒါဖတ်ပြီးမှ တံဆိပ်ခေါင်းဝယ်ယူ စာချုပ်ချုပ်ဆို စေလိုပါသည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဒါဖတ်ပြီးမှ တံဆိပ်ခေါင်းဝယ်ယူ စာချုပ်ချုပ်ဆို စေလိုပါသည်
BurmeseHearts | ဆောင်းပါး |
၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေသည် ယခင်က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အချို့ဒေသတုိ့တွင် အကျိုးသက်ရောက် ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ၂၇-၁၀-၉၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် ၁၈ / ၉၇ အရ နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးသို့ တိုးချဲ့အာဏာသက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေ ၏ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁)တွင် ဖော်ပြထားသော စာချုပ်စာတမ်းအမျိုးအစား ၆၅ မျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ယင်းဇယားတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် နှုန်းထားအသီးသီး အတိုင်း တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန် ရှိမည်ဖြစ် ပါသည်။
ထို့အတူ ယင်းဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော စာချုပ်စာတမ်း အမျိုးအစားအလိုက် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် ခြွင်းချက်များကိုလည်း ခံစားခွင့် ရှိမည်ဖြစ်ပါမည်။
တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထိုက်သင့်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများအပေါ်တွင် ကျသင့်သော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုမီ၊ သို့မဟုတ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အချိန်တွင် ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
စာချုပ်စာတမ်း တစ်ခုခုပေါ်တွင် တံဆိပ်ခွန် ထမ်းဆောင်ထိုက်ပါလျက် ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်၊ သို့မဟုတ် လျော့နည်း ထမ်းဆောင် ထားလျှင် ယင်းစာချုပ်စာတမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိက သိမ်းဆည်းရယူနိုင်ပြီး ရှောင်တိမ်းခဲ့သည့်၊ သို့မဟုတ် လျော့နည်းထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် တံဆိပ် ခွန်ကို ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရမည့်အပြင် ယင်း ရှောင်တိမ်းငွေ၊ သို့မဟုတ် လျော့နည်းငွေ၏ ၁၀ ဆ အထိကိုလည်း ဒဏ်ကြေးငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တံဆိပ်ခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချုပ်တစ်ရပ်ပေါ်တွင် တံဆိပ်ခွန်ထမ်းဆောင်ရာ၌ အစိုးရက တံဆိပ် ခေါင်းအက်ဥပဒေအတွက် ထုတ်ဝေထားသည့် စာချုပ်စာတမ်း အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ် ထားသည့် တံဆိပ်ခေါင်းအမျိုးအစားဖြင့် ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်၍ အထူးပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပါက စာပို့တံဆိပ် ခေါင်းများ အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
တံဆိပ်ခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချုပ်စာတမ်းတွင် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းမပါရှိလျှင် ဥပဒေ အရဖြစ်စေ၊ အမှုသည်တို့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ သက်သေခံချက် ရယူခွင့်ရှိသူ တစ်ဦး တစ်ယောက်က မည်သည့်အမှုကိစ္စအတွက်မဆို သက်သေခံချက်အဖြစ် လက်ခံနိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း၊ ထို့ပြင် အဆိုပါ သက်သေခံချက် ရယူခွင့်ရှိသူ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကဖြစ်စေ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အရာရှိ တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ အဆိုပါ စာချုပ်စာတမ်း အရ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ယင်းတို့ကို မှတ်ပုံတင် ခြင်း၊ မှန်ကန်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု သက်သေခံ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မရှိစေရဟု မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထား ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိဆောင်ရွက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်များ အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရုံမျှဖြင့် လုံလောက်မည် မဟုတ်ဘဲ ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ခွန် ထမ်းဆောင် ထားရန်၊ စာချုပ်စာတမ်း အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် တံဆိပ်ခေါင်းအမျိုးအစားဖြင့် ထမ်းဆောင်ထား ကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စာချုပ်စာတမ်း တစ်ရပ်ရပ်အပေါ်တွင် တံဆိပ်ခွန် ထိုက်သင့်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ရှိလျှင် မည်မျှထိုက်သင့်သည် စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကော်လိတ္တော်အရာရှိ ဖြစ်သည့် မြို့နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူးက အဆုံး အဖြတ်ပြုမှု၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုတို့ကို ဆောင်ရွက် ပိုင်ခွင့် ရှိသဖြင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဈေးကွက်အတွင်း တံဆပ် ခေါင်းအလွတ်များ၊ အသင့်ရိုက်နှိပ်ထားပြီးဖြစ်သည့် စာချုပ်စာတမ်းပုံစံများကို ရောင်းချလျက်ရှိကြရာ အချို့သော မသမာသူတို့က မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ် ခေါင်းအက်ဥပဒေအရ အစိုးရက ထုတ်ဝေထား သည့် တံဆိပ်ခေါင်းများ မဟုတ်သည့် ငါးကျပ်တန်၊ ခြောက်ကျပ်တန်၊ ၁၀ ကျပ်တန်၊ ၂၅ ကျပ်တန် နှိပ်တံဆိပ်ခေါင်းအတုများဖြင့် ရိုက်နှိပ် ရောင်းချ လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများ အား ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
အဆိုပါ တံဆိပ်ခေါင်းအတုများဖြင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် မိမိတို့ချုပ်ဆိုထား သည့် အကြောင်းအရာကိစ္စအတွက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်မပြုနိုင်၍ နစ်နာမှုများစွာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တံဆိပ်ခေါင်းများကို ပြင်ပဈေးကွက်တွင် အလွယ်ဝယ်ယူခြင်းမပြုဘဲ မိမိတို့နှင့် နီးစပ်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး များတွင် မိမိတို့ဆောင်ရွက်ကြမည့်ကိစ္စ၊ ချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်စာတမ်းအမျိုးအစားတို့ကို မှန်ကန်စွာ တင်ပြ ကြလျက် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခွန်ကို ကပ်နှိပ်ရ မည့် တံဆိပ်ခေါင်းအမျိုးအစား မှန်ကန်စွာဖြင့် ကပ်နှိပ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
မည်သူမဆို တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချသူအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း မခံရပါလျက် တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချ လျှင်၊ သို့မဟုတ် တံဆိပ်ခေါင်း တစ်စုံ တစ်ရာကို ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်၍ လက်ဝယ်ထားရှိပါက ခြောက်လအထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် ၅၀၀ အထိဖြစ်စေ စီရင်ခြင်းခံထိုက်စေရမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၅ တွင် တံဆိပ် ခေါင်းအတုပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ထောင်ဒဏ် တစ်သက်၊ သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ၊ ထို့ပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်ဟု လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၆ တွင် တံဆိပ်ခေါင်းအတု ပြုလုပ်သည့် ကိရိယာ၊ သို့မဟုတ် ၀တ္ထုပစ္စည်းကို လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၇ တွင် တံဆိပ် ခေါင်းအတုပြုလုပ်သည့် ကိရိယာကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၈ တွင် တံဆိပ် ခေါင်းအတုရောင်းချခြင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၉ တွင် တံဆိပ် ခေါင်းအတုကို လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း တို့အတွက် ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်အထိ၊ ထို့ပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်ဟု လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၆၀ တွင် တံဆိပ်ခေါင်း အတုမှန်း သိလျက်နှင့် အစစ်အမှန် အနေဖြင့် အသုံးပြုခြင်းအတွက် ခုနစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်၊ သို့မဟုတ် ငွေဒဏ်၊ သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ် နှစ်ရပ်စလုံး ချမှတ်နိုင် ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း သိရှိမှတ်သား ကြနိုင်ပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန ရုံးများတွင် မိမိအမှန်တကယ် အသုံးပြုလိုသော ကိစ္စရပ်အတွက် လိုအပ်သော အရေ အတွက်ကို တံဆိပ်ခေါင်းများအပေါ်တွင် ပါရှိသော သတ်မှတ်တန်ဖိုးများအတိုင်း ငွေအပိုမပေးရဘဲ လွယ်လင့်တကူ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ရေး အတွက် စီမံထားရှိသည်ဟု မေးမြန်းသိရှိရပါကြောင်း အသိပေးဖော်ပြအပ်ပါသည်။
This entry was posted on January 24, 2013, in ဥပဒေ, ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အားလုံးကို တန်ဖိုးထားပါ